Arrinta su’aalaha dhalisay ee uu sameeyey Fahad inta aan xildhibaanka loo dooran kahor | Arrimaha Bulshada
Home News Arrinta su’aalaha dhalisay ee uu sameeyey Fahad inta aan xildhibaanka loo dooran kahor
Arrinta su’aalaha dhalisay ee uu sameeyey Fahad inta aan xildhibaanka loo dooran kahor
Bulsha:- La-taliyaha amniga qaranka madaxweyne Farmaajo, Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo shalay tagay magaalada Beledweyne ayaa shahaadada musharaxnimo ku qaatay magac cusub, kaasi oo maanta lagu doortay.
Magaca cusub ee Fahad uu xildhibaanka ku noqday ayaa ah; Fahad Daahir Axmed, waxaana ka dhalatay dood badan iyo su’aalo ku saabsan halka uu ka yimid magacan cusub.
Fahad weligiis waxaa loo yaqiin Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, oo xitaa marka uu weriyaha ahaa uu afkiisa ka sheegi jiray. Sidaas darteed su’aasha ayaa ah; Fahad ma hadda ayuu magaca beddeshay mise magaca Fahad Daahir Axmed ayaa sax ah, oo weligiis wuxuu adegsan jiray magac aan sax aheyn oo ah Fahad Yaasiin Xaaji Daahir.
Hal arrin oo suurta-gal ah ayaa ah; in Fahad uu haysto baasaboor dal kale oo ugu qoran magaca Fahad Daahir Axmed, sidaas darteedna uu waafajiyey midkiisa Soomaaliya, maadaama ay fududahay in wixii uu doono uu ka sameysto Soomaaliya.
Fahad waxaa horey loogu eedeeyey kaalin kulahaa dilka Ikraan Tahliil oo aheyd Sarkaalad ka tirsan hay’adda NISA uu markaas Taliye ka ahaa, sida ay ehellada marxuumada ay u sheegen warbaahinta, inkasta oo Maxkamadda Ciidamada ay ku weysya wax ku lug lahaansho ah.
La-taliyaha amniga qaranka madaxweyne Farmaajo iyo xulafadiisa ayaa dadaal xoogan geliyay sidii uu kursigaas usoo qaadan lahaa, wuxuuna qorshaha kursigaan qeyb ka yahay xasaanad u helista xubno ka tirsan/tirsanaa NISA.
Ninkan oo 5-tii sano ee lasoo dhaafay aad isku qarinayey ayaa todobaadkan isa-soo shaac bixiyey, isaga oo doonayo inuu ku biiro Golaha Shacabka Soomaaliya.
Sida la fahamsan yahay, Fahad ayaa u tartami doono xilka guddoomiye ku-xigeenka ee baarlamaanka Soomaaliya, xilkaas oo uu horey u hayey Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey oo daaqada laga saaray, kadib markii uu kursigiisa kusoo baxay nin ay wateen xulafada Fahad.
Si kastaba, Fahad Yaasiin ayaa biirinaya saraakiisha ku soo baxday doorashada, kuwaas oo ay ka mid yihiin saaxiibadiisi Cabdullahi Kulane iyo Yaasiin Farey oo iyaguna horey loogu doortay ka mid noqoshada Golaha Shacabka Soomaaliya, safka horena kaga jiray eedeynta kiiska Ikraan.